Man United oo guul ay u qalantay Old Trafford kaga gaartay kooxda Sheffield United… +SAWIRRO – Gool FM
Man United oo guul ay u qalantay Old Trafford kaga gaartay kooxda Sheffield United… +SAWIRRO
(Manchester) 24 Juun 2020. Manchester United ayaa guul ay u qalantay garoonkeeda Old Trafford kaga gaartay kooxda Sheffield United, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada 31-aad ee horyaalka Premier League.
Daqiiqadii 7-aad kooxda Manchester United ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay Anthony Martial, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Marcus Rashford.
44 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay Manchester United ayaa la timid gool kale, waxaana dheesha 2-0 ka dhigay markale Anthony Martial, waxaana caawiyay goolkan Aaron Wan-Bissaka.
Daqiiqadii 74-aad Manchester United ayaa sii dheereeysatay hogaaminta ciyaarta, Anthony Martial ayaa dhaliyay goolkiisa saddexaad, wuxuuna dheesha ka dhigay 3-0, waxaana goolkan caawiyay Marcus Rashford
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 3-0 ay kaga adkaatay Manchester United kooxda Sheffield United oo marti ugu aheyd garoonka Old Trafford.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Liverpool iyo Crystal Palace ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Real Madrid iyo Mallorca ee horyaalka La Liga oo la shaaciyay